Top 10 Basic and Advanced Photoshop Courses | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Graphic Design, Fitaovana famolavolana, Inspiration, Photoshop
Raha mitady fampianarana Photoshop Online ianao mifanentana amin'ny zavatra ilainao, tsy azonao hadino ity lahatsoratra ity. Amin'ny internet, malalaka be ny tolotra fampianarana, ka ny fitadiavana izay mety indrindra aminao dia mety ho lasa odyssey. Noho izany, mba tsy handanianao fotoana bebe kokoa amin'ny fampitahana, Izahay dia mitondra anao ity lisitra ity miaraka amin'ny fampianarana Photoshop fototra sy mandroso 10 tsara indrindra Vonona hianatra ve ianao? Diniho tsara ireo tolo-kevitray.
1 Fianarana fototra Photoshop
1.1 Fampidirana ny Adobe Photoshop
1.2 Adobe Photoshop amin'ny famoahana sary sy famerenana indray
1.3 Adobe Photoshop ho an'ny mpaka sary
1.4 Fampidirana ny Photoshop for Illustrators
1.5 Adobe Photoshop CC: Mazava ho azy fa vao manomboka ho an'ny manam-pahaizana
1.6 Mianara manitsy ny sarinao amin'ny Photoshop CS6
2 Fampianarana Advanced Photoshop
2.1 Advanced Adobe Photoshop
2.2 Advanced Photoshop: Hihg-End Retouch ho an'ny lamaody sy hatsaran-tarehy
2.3 Photoshop mandroso ho an'ny haingam-piasa haingana
2.4 Famerenana sary retouching amin'ny Photoshop
Fianarana fototra Photoshop
Raha te hampiofana amin'ny famolavolana sary ianao dia fanombohana tsara ny Adobe Photoshop. Ity rindrambaiko fanovana ity dia tena matihanina sy mahombyAzo ampiasaina hanovana sary izy io ary koa hamoronana sombin-tsolika. Na izany aza, fantatray izany tsy fitaovana tsotra ary izany amin'ny voalohany dia mety ho mampatahotra kely. Ka, Nisafidy ho anao ireo taranja Photoshop fototra 6 izahay izany dia hanampy anao handray ny dingana voalohany amin'ny programa.
Horonan-tsary 6/54 m
Fianarana 5 amin'ny hafainganam-pandehanao ary miaraka amin'ny fidirana tsy voafetra
Fampidirana ny Adobe Photoshop Kitapo misy taranja 5 izy io nampianarin'i Carles Marsal. Fampidirana mahery vaika izy io, amin'ny fitambarany dia misy lesona 50, dia hahafahanao mahazo ny fahalalana ilaina rehetra hiasa miaraka amin'ity fitaovana ity amin'ny sehatra matihanina, Na dia manomboka amin'ny voalohany aza ianao!
Ao amin'ireo sakana 5 dia hianaranao ny:
Mifindra manodidina ny interface interface ary tantano ny fitaovana lehibe (course 1)
Mitsabo sary miaraka amin'ny Photoshop (course 2)
Ampiasao ary apetraka borosy (Mazava ho azy 3)
manao tweaks sary (course 4)
Miaraha miasa amin'ny jiro sy loko (Mazava ho azy 5)
Ny iray amin'ireo teboka manintona indrindra amin'ny fampianarana dia izany azonao atao amin'ny hafainganam-pandehanao izany. Vantany vao mividy azy ianao diahanana fidirana tsy voafetra ianao, amin'izay ianao afaka miverina miverina amin'ny lesona efa nolalovanao mba hanazavana ny fisalasalana na hanamafisana ny fahalalanao.
Adobe Photoshop amin'ny famoahana sary sy famerenana indray
Horonan-tsary 6/30 m
Fianarana 5 mifantoka amin'ny famerenana sary
Ity fampianarana Domestika ity, izay ampianarin'ny mpaka sary matihanina Daniel Arranz, dia mifantoka bebe kokoa amin'ny retouching sy ny fitsaboana sary. Raha ny fitiavanao sary no nahatonga anao liana amin'ny Photoshop, ity no làlana tadiavinao!
Misy ny sakana 5, Lesona 51 amin'ny fitambarany, izay hianaranao ny hahafehy ny hetsika ilaina indrindra amin'ny programa. Amin'ny faran'ny fampianarana dia ho azonao ny fahalalana ilaina hanovana ny sarinao toy ny tena matihanina amin'ny fanovana sy famerenana. Na dia tena voafaritra tsara aza izy io, ny fanazavana dia miainga avy amin'ny fototra indrindra ary mazava be, manao azy ho lalam-pihariana ho an'ny vao manomboka ao amin'ny Adobe Photoshop. Ho fanampin'izany, tsy voafetra ny fidirana, azonao atao ny maka ny fotoanao hahatakatra tsara ny hevitra tsirairay ary avereno jerena isaky ny irinao.
Adobe Photoshop ho an'ny mpaka sary
Fanamarihana tsara 99%
Horonan-tsary 9/21 m
Teknika hanomezana famaranana matihanina ny sarinao
Ary raha miresaka momba ny sary foana isika, ity taranja Orio Segon ity dia safidy hafa tena tsara. Ity fampianarana ity dia manambara amin'ny fomba tsotra, ny lakile hamoahana aorian'ny famoahana ny sarinao ary hahatratraranao valiny matihanina. Ahitana lesona 47 voarindra ao 5 fakana:
Sakanana voalohany izay atolotra ny programa ary ny fitaovana ilaina indrindra.
Blaogy faharoa izay misitrika ao anaty toe-javatra retouch, famaranana ary fampidirana ny Rano fakan-tsary.
Ny sakana fahatelo dia niompana fivoriana any ivelany.
Blaogy fahefatra natokana ho azy sary fanaovana dokambarotra.
Ary ny sakana farany amin'ny Saripika vokatra.
Toy ny ambiny amin'ny taranja Domestika, ny Adobe Photoshop ho an'ny mpaka sary dia manana fidirana tsy voafetra. Ny zavatra tsara indrindra dia, na dia mifantoka amin'ny fahalalana ara-teknika mifandraika amin'ny programa aza, ampidiro ny fika mahasoa sy mahasoa izay hanatsara ny famaranana ny sangan'asa. Tsikelikely, ianao dia handinika teknika ahafahanao mahazo ny fahaizanao mamorona rehetra.
Fampidirana ny Photoshop for Illustrators
Horonan-tsary 6/52 m
Sary nomerika avy amin'ny rangotra
Te hanao sary ve ianao ary te hanomboka hamorona sary nomerika ao amin'ny Photoshop? ATSINANANA Fonosana 6 nampianarin'i Gemma Gould dia handresy anao. Raha raisinao io dia tsy ho vitanao ihany ny mamintina tsara ny famoronana anao koa hahita teknika sy fomba vaovao hanampy amin'ny fivoaranao amin'ny maha-mpanakanto anao ianao.
Hanomboka amin'ny fotony i Gould, hampahafantatra anao ny programa lehibe sy ny fitaovana lehibe, ary dia hitarika anao amin'ny tetikasa farany izay hianaranao manondrana ny asanao hanonta izany sy hampiasa azy amin'ny internet. Raha efa manokan-tena amin'ny fanoharana ianao, dia ity fotoana iray hanatsarana ny mombamomba anao ary araraoty tsara ny zavatra noforoninao. Ny hany lesoka hitako dia ny audio amin'ny horonan-tsary amin'ny teny anglisy, ka raha tsy mahafehy ilay fiteny ianao dia mety hiadana kely ianao. Na izany aza, mampihetsika ny dikanteny amin'ny teny espaniola dia tsy tokony hanana olana ianao.
Adobe Photoshop CC: Mazava ho azy fa vao manomboka ho an'ny manam-pahaizana
Fantaro lalina ny programa
Ity fampianarana Photoshop ity, izay ampianarin'i Phil Ebiner, dia natao manokana ka ao anaty horonan-tsary 19 ora fotsiny ary miaraka amina fanazaran-tena kely mandalo hatramin'ny vao manomboka ka hatramin'ny manam-pahaizana. Eo am-piandohana dia hanome anao fitaovana izy ireo hahafahanao manaraka tsara ny tutorial ary hahafahanao manokana ny fotoana fanampiny tadiavinao.
Izany dia safidy mety indrindra ho an'ny vao manomboka satria mampivondrona izay ilainao rehetra izy io fantaro lalina ny programa. Ny zavatra tsara indrindra dia ny hoe rehefa mianatra mampiasa ireo fitaovan'ny rindrambaiko lehibe ianao, hamolavola sary sy singa tena izy ianao ho an'ny tamba-jotra sosialy na ho an'ny orinasanao. Ho fanampin'izay, hanomboka amin'ny famerenana sary sary ianao.
Mianara manitsy ny sarinao amin'ny Photoshop CS6
4.4 / 5 naoty
Ianaro ny fomba fanaovana retouching fototra amin'ny Photoshop
Ity fampianarana Adobe Photoshop ity dia mahaliana ny manomboka amin'ny programa. tolotra fanazavana fototra sy mazava amin'ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny rindrambaiko famolavolana ary hanome anao fahalalana ilaina mba hanatanterahana izany ny retouching sary voalohany nataonao, fampiharana teknika, sivana ary fomba samihafa. Ary koa, rehefa feno ny Lesona 44 izany no mandrafitra ny làlana ho tratrarinao mamorona ny sary voalohany sy ny sary matihanina.
Fampianarana Advanced Photoshop
Raha efa mahay mampiasa Photoshop ianao fa te-hitsambikina ambaratonga ve ianao?, ataovy Mazava ho azy fa afaka manampy anao ny Mazava ho azy hahatratrarana izany tanjona izany. Ny zavatra tsara dia hoe rehefa mazava ny momba ireo lafiny fototra indrindra amin'ilay rindrambaiko dia afaka mifantoka ianao Mianara teknika manokana hanatsarana ny kalitaon'ny volavolanao ary mamela anao ho mailaka kokoa amin'ny fikirakirana ity fitaovana ity. ny 4 fampianarana Photoshop mandroso izay asehonay etsy ambany tena mety izy ireo mba hampitombo ny programa ary ho lasa tena matihanina.
Horonan-tsary 4/52 m
Fianarana 5 hitondrana anao any amin'ny ambaratonga manaraka
Carles Marsal dia manolotra ao Domestika a fonosana fampianarana mandroso 5 natao ho an'ireo izay efa naka ny làlana fampidirana amin'ny Adobe Photoshop na izay mahay tsara amin'ny programa. ny Lesona 35 Mamorona izany, manangona teknika tena ilaina hanatsarana ny endrikao sy hampivelatra ny fahaizanao ao amin'ny programa. Ireo fampianarana ireo dia hamela anao:
Jereo ny azo atao vector Photoshop
Mianara amin'ny ampiasao ny fomba fampifangaroana samihafa
Miasa amin'ny famoronana bebe kokoa miaraka amin'ny lahatsoratra
Jereo ny mety ho zavatra marani-tsaina hanampy anao ampitomboy ny tahan'ny asanao
aplicar sivana marani-tsaina
Advanced Photoshop: Hihg-End Retouch ho an'ny lamaody sy hatsaran-tarehy
4.7 / 5 naoty
Manokana ho an'ny retouching sary
Ity fampianarana Photoshop ity, azo alaina ao amin'ny Undemy, Izy io dia mikendry ireo matihanina amin'ny fakana sary na ny volavola tadiavin'izy ireo specialize amin'ny sary retouching ary iza no tena liana amin'ny tontolon'ny lamaody sy hatsaran-tarehy. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity taranja ity dia ao anatin'ny 2 ora fotsiny mandefitra izay rehetra ilainao hianaranao ny fomba fanaovana retouching sary avo lenta, misaotra fanazavana mazava sy milalao teknika isan-karazany. Anisan'ireo atiny Mazava ho azy fa hahita vaovao ianao:
NAMPAHAFANTARAN'I ny sary
Fampiharana ny makiazy niomerika
Technique mandositra ary mandoro
Photoshop mandroso ho an'ny haingam-piasa haingana
4.6 / 5 naoty
Mianara miasa haingana
Mety efa nitantana ny Adobe Photoshop tamin'ny fahalavorariana ianao, saingy tsapanao fa mandany fotoana betsaka kokoa noho ny tianao hamolavolana ny sanganasa tsirairay ianao. Raha tsapanao fa fantatra ianao dia ity no lalanao. Ao amin'ny lesona hahita toro-hevitra, teknika ary torohevitra maro karazana ianao hahatratrarana ny fiasa haingana, tsy mahafoy ny kalitaon'ny sombinao. Hianatra hanararaotra ianao fiasa mandeha ho azy Photoshop ary ho hitanao ny maha-zava-dehibe ny fizotrany sy ny vokany haverina averina any aoriana any amin'ny faritra hafa.
Ary raha fohy ara-potoana ianao dia aza manahy! Tena fohy ny fanazavana, mba hahafahanao mamita ny fampianarana ao anatin'ny ora vitsivitsy. Na dia vitanao io aza dia mbola hanana fidirana ianao, noho izany afaka mijery ny horonan-tsary foana ianao ary avereno ireo lesona izay sarotra kokoa aminao.
Famerenana sary retouching amin'ny Photoshop
Tsy misy naoty
Mianara mamerina mamerina sary
Amin'ity fampianarana Adobe Photoshop ity ho hitanao izay rehetra ilainao raha te-hifandray amin'ny matihanina ianao amin'ny sarinao. Ny teknika novolavolaina tao amin'ny Mazava ho azy fa kendrena hahatratra ny fifandraisana voajanahary, izay manaja ny firafitry ny hoditra ary mamela ny fivelaran'ireo sary an-tsary kalitao. Izy io dia voaforona lesona telo tsy mitovy amin'izay hianaranao:
Retouch tarehy sy vatana
Miaraha miasa amin'ny ny jiro sy ny loko
Miaraha miasa amin'ny mifanohitra ary mainty sy fotsy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Top 10 Basic and Advanced Photoshop Courses